Kwayedzwa kugona kwemabhatiri eiyo iPhone 13 mushure mekuisanganisa | IPhone nhau
Sezvinotarisirwa, nekukurumidza apo Apple yatanga kuendesa yekutanga mirairo yeiyo nyowani iPhone 13, misodzi yekutanga misodzi yakurumidza kutanga kuoneka pasocial media. Iko kunogara kune zvakawanda zvekuda kuona mukati mechinhu chitsva icho chinoonekwa pamusika.
Uye imwe yedata rekutanga rinouya muchiedza kana uchiona mukati meiyo nyowani iPhone 13, ndiyo kugona chaiko kwemabhatiri ako, sezvo iri skrini-yakadhindwa pane icho chinhu pachayo. Saka isu tatova nemabhatiri kugona kweayo mana iPhone 13. mhando. Ngatizvionei.
Iwo ekutanga mayuniti ekutanga odha eiyo nyowani iPhone 13 kutenderera pasirese akatotanga kuunzwa. Uye ndeyechinyakare kuona kuti ndevapi vashandisi vekutanga vanoburitsa yavo yekutanga "unboxing" uye zvimiro, uye vane hushingi, yekutanga disassemblies.
Uye zvechokwadi, imwe yedhata inonyanya kukosha iwe yaunogona kucherechedza kana iwe uchigumisa iyo iPhone ndeyekuona iro chairo bhatiri bhatiri, sezvo iri skrini-rakadhindwa pairi. Saka isu tinogona kutotarisa kuti kambani haina kutinyengedza, uye chaizvo iwo mana mamodheru emhando dzeiyo iPhone 13 vane makuru emagetsi mabhatiri kupfuura iwo eiyo iPhone 12 renji.
Kuenzanisa pakati pe iPhone 13 ne iPhone 12
iPhone 13: 3.227 mAh vs. iPhone 12: 2.815 naRaama
Tichitarisa kugona chaiko, kambani haina kutinyengera. Apple yakave nechokwadi chekuti iyo iPhone 13 Pro inopa kusvika Maawa mashanu nehafu yehupenyu hwebhatiri uchienzaniswa neiyo iPhone 12 Pro, nepo iyo iPhone 13 Pro Max iine hupenyu hwebhatiri hweanosvika 2,5 maawa yakareba kupfuura iPhone 12 Pro Max.
Saka kune chikepe munguva pfupi, ndicho chinhu chekutanga chakaonekwa mune yekutanga kuburitswa disassemblies. Tichamirira kubvarurwa kwemidziyo iFixit kune rumwe ruzivo rwehunyanzvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 13 » Kwayedzwa kugona kwemabhatiri eiyo iPhone 13 mushure mekuzvikatanura
Izvo hazviwanzoitika kuti iyo iPhone 13 ine bhatiri rakanyanya kupfuura iyo iPhone 13 pro
Iyo Apple Watch Series 6 oximeter inoshanda sekushambadzira zvinoenderana nekudzidza